Gacaliye Esther ee aaladaha iOS ka ee la sii deyn doono dhamaadka sanadka | Wararka IPhone
Gacaliye Esther ee macruufka waxaa la sii deyn doonaa dhammaadka sanadka. Ciyaarta xiisaha badan ee kombiyuutarada (Windows, Mac OSX iyo Linux) iyo qunsuliyadaha (PS4 iyo Xbox) boodayaa qalabka mobilada.
Soosaaraha ciyaarta, Qolka Shiinaha, ayaa ku dhawaaqay via twitter horyaalkii caanka ahaa ku habboon iphone iyo ipad. Faahfaahinta waan kuu sheegayaa.
Wadada loogu ciyaaro Dear Esther qalabka Apple waxay ahayd mid gaabis ah oo rogmanaysa. Markii ugu horreysay, ciyaarta waxay ku dhalatay qaab bilaash ah oo ah mashiinka isha ee 'Valve'. Markii dambe, sida Dear Esther, waxaa si rasmi ah loogu bilaabay Mac-yada iyo PC-yada sanadkii 2012. Ugu dambeyntiina, sanadkii 2016 wuxuu u booday qalabka ciyaarta kala duwan, iyadoo la diiwaan geliyay in ka badan hal milyan oo nuqul oo la iibiyay. Metacritic waxay siisay dhibco 75/100, iyo IGN oo ah 8/10. Horeba 2015, qayb labaad ayaa loo yaqaan Qof walba wuu u Tagay Koritaanka.
1 Gacaliye Esther ee macruufka
2 Taariikhda sii deynta
Gacaliye Esther ee macruufka
Tartankan jaantuska ah waa aragti loo fiirsado, oo leh qaab aad u xiiso badan oo taariikhda ah. Waxay ahayd wax lagu garaaco kombiyuutarada iyo qalabka wax lagu xiro, waana hubaal inay sidoo kale ku jiri doonaan iPads iyo iPhone.
Waxaad ku jirtaa hawlgal aad ku sahaminayso jasiiradda la deggan yahay ee Hebridean. Weriye aan la aqoon ayaa kuu aqrin doona qoraallo qarsoodi ah qayb kasta oo ka mid ah jasiiradda aad booqato. Waxaad ka heli doontaa wax kasta oo ka socda dhismayaasha laga tegey iyo qolalka yar yar, illaa shabakad aad u ballaadhan oo godad ah iyo doonyaha burburay, iyadoo jawi aad u dahsoon lagu helayo jaantusyo iyo astaamo ay tahay inaad xalliso
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan ciyaarta ayaa ah habka kala sooca ah ee loo helo kaararka, taas oo ka dhigeysa mid kasta ciyaar gaar ah, ma ahan sheeko xariiqa. Qaab-dhismeedka sheekadu wuxuu ku dhowaad ku qasbayaa ciyaaryahanka inuu gaaro gabagabadiisa, oo wuxuu uga tagayaa sheekada guud fasiraad badan.
Nasiib darrose ragga qolka Shiinuhu ma sheegin taariikhda sii-deynta gaarka ah ama qiimaheeda. Waxa kaliya ee ay maanta noo cadeeyeen ayaa ah inay tahay kahor dhamaadka sanadka 2019.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Gacaliye Esther ee macruufka waxaa la sii deyn doonaa dhammaadka sanadka